एमबिबिएस अध्ययन गर्न बंगलादेश गएका झन्डै दुई सय नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् । अलपत्र विद्यार्थीको उद्धारका लागि समन्वय गरिदिन भन्दै बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखालाई पत्र पठाएको छ । नेपालबाट मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू बंगलादेश जाने गरेका छन् । नेपालमा एमबिबिएसको सिट कटौती भएको मौका छोपी विभिन्न कन्सल्टेन्सीले सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी पठाउँदा समस्या देखिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । ‘बंगलादेशमा कति विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् भन्ने दूतावासले जानकारी दिएको छैन । विद्यार्थी सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ । अहिले प्राप्त जानकारीअनुसार दुई सयको हाराहारीमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थी अलपत्र परेका छन्,’ काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा। दिलीप शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने । बंगलादेशका ५० मेडिकल कलेजमा नेपाली विद्यार्थी बंगलादेशका ५० वटा मेडिकल कलेजमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएको मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । ‘अहिले केही विद्यार्थी न्यायको माग गर्दै बंगलादेशको अदालतसम्म पुगेको जानकारी आएको छ । अलपत्र परेका विद्यार्थीबारे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर चाँडै निर्णय लिनेछौँ,’ शर्माले भने । विभिन्न कन्सलटेन्सीले नेपालका मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटेको फाइदा उठाउँदा विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेको काउन्सिलले बताएको छ । ‘विद्यार्थी भर्ना हुने वेलामै मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने हो,’ डा। शर्माले भने, ‘तर, कलेजले विद्यार्थीलाई झुक्याएर अन्तिममा दर्ता गर्ने भन्दै राख्ने
भाद्र १७,बुटवल/ अकाडेमिक स्कुल एसोसिएसन अफ नेपाल (आसन) द्वारा ५ बिधामा आसन स्तरिय प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । अनुशासन विषयक खुल्ला कबिता प्रतियोगितामा ड्रीम भिजन स्कुलकी शुश्मा खनाल प्रथम, ब्राइट स्कुलकी दिक्ष्या घिमिरे दोस्रो , दुर्गा शैक्षिक कि रक्षा भन्डारी एबम लिटल फ्लावर्स का बिमल पराजुली तृतिय र मदरल्यान्ड्कि शिक्षा भुसाल ले सान्त्वना स्थान हासिल गरका छन । त्यसै गरि खुल्ला चेस प्रतियोगितामा ड्रीम भिजन स्कुलका सिद्धान्त खनाल प्रथम र सिताकिङ्सका रबिन्द्र थारु दोस्रो स्थान हासिल गरका थिए । खुल्ला पिस एन्ड डेभ्लपमेन्ट बिशयक अङ्ग्रेजी निबन्ध अन्तर्गत मदर्ल्यान्डका मनोहर श्रेस्ठ प्रथम, लिटिल फ्लावर्स का रोहन भुसाल दोस्रो, ड्रीम भिजन का निराजन आचार्य तेस्रो र दुर्गा शैक्षिक ग्रीहका बालकृश्ण यादब सान्त्वना भएका थिए । गणितीय दौड मा किम्बर्लि किन्डर गार्टेन कि भानु मति यादब प्रथम ,मदर्ल्यान्ड स्कुलकि निपाङ्ग थापा दोस्रो र सिद्दी बिनायक सेकेन्डरी स्कुलको कपिल पौड्याल तेस्रो भएका थिए । प्राकृतिक सुन्दरता बिशयक चित्रकला प्रतियोगितामा दुर्गा शैक्षिक का आकाश रिजाल प्रथम किम्बर्लिका भबिस्वर बि क दोस्रो र सिद्दी बिनायकका रेशम चौधरिले तेस्रो भएका थिए । आसनका अध्यक्ष चुडामणी डुम्रेको अध्यक्षता, जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देहीका स्कुल सुपरभाइजर चन्द्रकान्त शर्मा को प्रमुख आतिथ्यता, आसनका उपाध्यक्ष गंङाराम दङोरियाले स्वागत मन्तब्य, लिटल फ्लावर्स का प्रबन्ध निर्देशक पानकुमार फौदार को सम्योजकत्व मा सम्पन्न कार्यक्रम को
प्रेमको रहस्य खुलेपछि कक्षा ६ मा पढ्ने बालिकाले गरिन अात्महत्या (पत्रमा के थियो पुरा पढ्नुहोस्)
‘समीर म तिमिलाई माया गर्छु, ‘आई लभ यू सो मच एण्ड मिस यू सो मच’, मैले यो जीवनमा तिमी बाहेक अरुलाई सोच्न समेत सकेको छैन। कसम म तिमी बाट टाढा हुन सक्दिन्। तिमी बिनाको जिन्दगी सोच्न समेत सक्दिन।’ ‘समीर हामीले बा आमाको सपना पुरा गर्नुछ। तर, मैले सकिन तिमीले पूरा गर्नु। तिम्रो बा आमासंग स्कुल पढाउने खर्च नहोला, म तिमीलई खर्च दिन्छु पढ। स्कुल आऊ।’ ‘म बाबु आमाकी एक्ली छोरी हुँ। जे भने पनि मान्नुहुन्छ। तिम्रो लागि पैसाको व्यवस्था म गरौँला तर तिमी सधैँ स्कुल आऊ ल। सुनेको छु, तिमी पत्रिका बेचेर हिँड्छौ रे ! अब हिड्नु पर्दैन।’ ‘समिर तिमी कति दुःख गर्छौँ है ! तिमीले मलाई मनपराए पनि नपराए पनि म सधँ तिमीलाई माया गरिराख्छु। मेरो प्रेम प्रस्ताव स्वीकार। मलाई भन्न लाज लागे मेरी साथी दीपा चौलागाई भन्नु ल !’ ‘माया जबरजस्ती गरिने कुरा पनि होइन। तिमी मलाई माया गर्र्छौँ वा गर्दैनौँ भोलि एउटा कापिको पानामा लेखेर दिनुहोला समिर। ‘आई लभ यू समिर’ म तिमीलाई सधैँ माया गरिराख्ने छु। यी माथिका बुँदा १३ वर्षीया बालिका निर्मला सुनुवारले आफ्ना प्रेमी समीर श्रेष्ठलाई आत्महत्या गर्नुअघिको प्रेमपत्रमा लेखेकी हुन्। काभ्रेको रोशी गाउँपालिका १ खहरेपागुकी निर्मलाले प्रेमिको नाममा प्रेमपत्र लेखेर आत्महत्या गरेकी छिन्। प्रेमीलाई लामो पत्र लेखेर बनेपा ७ स्थित डेरामा बस्दै आएकी
काठमाडौं – रोजगारीको खोजी हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने आफ्नो लागि आवश्यक जागरिक अब सरकारी वेबसाइटमै गएर पनि खोज्न सकिने भएको छ । सरकारले युवालाई रोजगारसम्बन्धी सूचना दिन http://www.jobkhoj.gov.np वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । अहिले विभिन्न निजी क्षेत्रका कम्पनीले रोजगारीको सूचना दिन साइटहरु चलाइरहेका छन् । अब भने सरकारी तवरबाटै यस्तो सुरु प्रयास भएको छ । यसमा विभिन्न पदहरुमा माग भएका भ्याकेन्सी नोटिस राखिएको छ । आफ्नो योग्यता पुग्ने पदमा कहाँ जागरि खुलेको छ भन्ने थाहा पाउन यो साइट उपयोगी हुनेछ । उपयुक्त पदमा आवेदन गर्न यसले सूचना र सहायता प्रदान गर्छ । विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले यो वेबसाइट सुरु गरेको हो । बेरोजगारहरुको लगत संकलन गरि श्रम बजारमा बेरोजगारीको स्थिति पहिचान गर्न, रोजगारीको क्षेत्र तथा अवसरहरु खोजी गर्न, बजार सम्बन्धी सूचनाहरु विद्युतीय मध्यमबाट समेत प्रबाह गरी श्रम बजार सूचनामा सरोकारवालाको पहुँच सरल र सहज तुल्याउन यो प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ । रोजगार सूचना केन्द्रले बेरोजगार दार्त फारम वितरण तथा बेरोजगारहरुको लगत संकलन गर्ने, विद्युतीय मध्यमबाट तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने, तथ्यांक प्रशोधन तथा विश्लेषण गर्ने, तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, रोजगारदाताहरुसंग छलफल गर्ने, रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान गर्ने, श्रम बजार सूचना व्यवस्थापन गर्ने , श्रम बजारमा रहेको अबसरको प्रचार प्रसार गर्ने र रोजगार मेला आयोजना गर्ने तथा रोजगारी सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्ने काम गर्छ ।
५०० रुपैयाँको लगानी यसरी बन्छ २ करोड ! (सूत्रसहित)
कठमाण्डौ । एक करोड वा त्यो भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न तपाईले मासिक निकै ठूलो रकम बचत गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुु हुँदैछ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ । आम रुपमा मानिसहरुले यस्तै सोंचका कारण जीवनमा धेरै पैसा जम्मा गर्न सक्दैनन् । तर तपाई ५ सय रुपैयाँ मासिक बचतबाट सुरु गरेर ३० वर्षको अवधिमा १.५ करोडदेखि २ करोडसम्म पैसा जम्मा गर्न सक्नुुहुन्छ । केही अन्तराष्टिय विज्ञहरुले दिएको सुुझाव अनुसार तपाईका लागि लगानीको यो सूत्र निकै सहज र सरल छ । तपाईले यो स्किमअन्तरत मासिक ५ सय रुपैयाँ लगानीबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । यो हिसाबले पहिलो वर्ष तपाईले कुल ६ हजार लगानी गर्नुहुन्छ । यसपछि तपाई प्रत्येक वर्ष आफ्नो मासिक लगानीमा २० प्रतिशतको हिसाबले बढाउँदै जानुुहोस् । यो हिसाबले दोश्रो वर्षदेखि तपाईको लगानी मासिक ६ सय रुपैयाँ हुन पुुग्छ । यसैगरी, प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतको दरले लगानी बढाउँदै जाँदा ५ वर्षमा तपाईको मासिक लगानी १०३६ रुपैयाँ तथा १० वर्षमा २५८० रुपैयाँ हुन जान्छ । कहाँ गर्ने लगानी ? तपाई यो स्किम अन्तरगत लामो समयका लागि लगानी गरिरहनुुभएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले नेपालको म्युुचुुअल फण्डहरुमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । नेपालका प्राय धेरै म्युुचुुअल फण्डहरुले वार्षिक १० देखि २० प्रतिशतको रेञ्जमा इकाईधनीहरुलाई रिटर्न दिइरहेका छन् । लामो समयको लगानीमा यसरी मिल्छ फाइदा लामो समयका लागि
रुपन्देहिको फर्साटिकरमा आसन रुपन्देहीको स्थापना
भाद्र ६ बुटवल / रुपन्देहीमा शैक्षिक निजी विद्यालयहरुको संगठनात्मक एकता, कार्यमा एकरुपता, विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको चौतर्फी विकासका लागि एकाडेमिक स्कुल एसोसिएसन अफ नेपाल (आसन) ÷शैक्षिक विद्यालय संघ, नेपाल नामक संघको स्थापना भएको छ । रुपन्देही जिल्ला अन्तरगत १० ओटा निजी विद्यालयका संचालकहरुको उपस्थितीले चुडामणि डुम्रेको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमित गठन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा गंगाराम दंगोरीया, सचिवमा मनोज अधिकारी, सह–सचिवमा श्रीराम यादव, कोषाध्यक्षमा राजु थापा र सदस्यहरुमा अमृत के.सी र जगत रानाभाट रहेका छन् । पहिलो चरणमा संस्थाको नामाकरण सँगै गठन गरिएको कार्यसमितिलाई आगामी दिनमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका निजी विद्यालयहरु सँग हातेमालो गर्दै सदस्यता थप गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धी गरी चुस्त दुरुस्त रुपले संचालन गर्दै लैजाने र विद्यार्थी केन्द्रित कार्यहरुबाट मुलुककै नमुना संस्था बनाउने उद्देश्यका संस्था स्थपाना गरिएको नवगठित सदस्यहरु बताउछन् । संघले स्थापना सँगै यही भाद्र १६ गते आसन स्तरीय विविध प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । शुद्दोधन–४, फर्साटिकर स्थित लिटल फ्लावर्स अंग्रेजी माविमा सो विद्यालयका प्रबन्धक पानकुमार फौदारको संयोजकत्वमा प्रतियोगिता गरिने भएको हो । प्रतियोगितामा अंग्रेजी माध्यममा खुल्ला निबन्ध, खुल्ला चेस, आधारभूत तह चित्रकला, प्राथामिक तह गणितिय दौड र आधारभूत तह कविता लगाएतका विधाहरु रहने छन् । विद्यार्थीको अन्तरनिहित प्रतिभालाई उजागर गर्ने हेतुले यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको संघका नवगठित अध्यक्ष चुडामणि डुम्रेले
नमुनामा जिल्ला स्तरिय चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न
बिष्णु कुवर, जेठ २१, बुटवल / राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन रुपन्देहीको आयोजना र न्यू नमुना बोर्डिङ हाई स्कुल देवदह १० भलुहि रुपन्देहीको आयोजनामा साँस्कृतिक बिबिधता हाम्रो सम्पदाू विषयक जिल्ला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। जिल्लामा रहेका निजी विद्यालयहरु बिच आत्मिय सम्बन्ध स्थापित गर्दै विद्यार्थीहरुको अन्तर निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने उदेश्यले आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा जिल्लाका उन्नाइस विद्यालय सहभागी थिए। प्रतियोगितामा न्यू नमुना बोर्डिङ हाई स्कुलका सुमित बि.के प्रथम, सगरमाथा आवासीय उच्च मा. बि का झलक राना द्वतिय, कोलिय इङलिस स्कुलका अनुप हिस्कि तृतीय र ग्यालेक्सी इङलिस बोर्डिङ स्कुलका प्रविन बि. के सान्त्वना भएका छन्। एन प्याबसनका केन्द्रीय सदस्य राजु गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा चित्रकार शान्ताराम गिरि र बिष्णु न्यौपानेले निर्णायकको भुमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । एन प्याबसन रुपन्देही अध्यक्ष देउ प्रकाश राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा एन प्याबसन रुपन्देहीका उपाध्यक्ष तिल बहादुर केसीको स्वागत मन्तव्य,एन प्याबसन रुपन्देही सह(कोषाध्यक्ष होमनाथ ढुङ्गानाको संयोजन र एन प्याबसन रुपन्देही सचिव बिष्णु पौडेलको सञ्चालन रहेको थियो ।
रेडक्रस दिवसको अवसरमा शैक्षिक सामाग्री प्रदान
विष्णु कुँवर बुटवल बैशाख,२५ / नेपाल जुनियर रेडक्रस सर्कल न्यू नमुना बोर्डिङ हाई स्कुल देबदह भलुहिले विश्व रेडक्रस दिवसको अवसरमा विद्यार्थी लाई शैक्षिक सामाग्री प्रदान गरेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तिलोत्तमा-१६, सैनिकटोल निवासी मनिष साठिघरेलाई आवश्यक शैक्षिक सामाग्री प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रिन्सिपल होमनाथ ढुंगानाले सहयोगी विद्यार्थीहरुलाई धन्यवाद दिदै यस्ता कार्यक्रमको लागि आफ्नो साथ र सहयोग सधै रहिरहने बताउनुभयो । साथै उक्त कार्यक्रमले विद्यार्थी अझ उत्साहित भएको र आगामी दिनमा पनि यस्तै सामाजिक कार्यमा विद्यार्थी हरुलाई प्रतक्ष सहभागी गराइने शिक्षक नायब कृष्ण प्रसाद पन्थीले जानकारी दिनुभयो। जुनियर रेडक्रसकि अध्यक्ष कल्पना खत्रीको अध्यक्षता र सचिव जिना कृति ढुंगानाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा भाइस प्रिन्सिपल एकनारायण न्यौपाने, लेखा प्रमुख खड्क बहादुर क्षेत्री, अन्य शिक्षक, विद्यार्थी लगायत स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो ।
बुटवल, २८ फागुन । बुटवल कालिकानगर मझुवा स्थित इन्टलेक्च्युअल एकेमेडमीमा कक्षा १० का बिद्यार्थीलाई बिदाई गरिएको छ । प्रवेशिका परिक्षाको तयारी गरेका उनीहरुलाई सोही बिद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीले सम्मान सहित बिदाई गरेका हुन् । बिद्यार्थी बिदाई कार्यक्रममा बोल्दै रुपन्देहीका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी टिकाराम शर्माले ठूलो भन्दा पनि राम्रो मान्छे बन्ने प्रयास गर्न बिद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो । कक्षा ९ की छात्रा सुशिला सोमैको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बिद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज अर्याल, संस्थापक अध्यक्ष डा. कृष्ण खरेल, प्रवन्ध निर्देशक रामराज पोख्रेल, प्राचार्य ध्रुवराज पन्थी, कोर्डिनेटर खुम पालुङ्गे, शिक्षक सुरेश चौधरी, बिद्यार्थीहरु स्मृति मरासिनी, नविना ज्ञवाली लगायतले भनाई राख्नुभएको थियो ।
काठमाडौंका विद्यालयमा विद्यार्थीको खडेरी, ८५ विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी
२९ फागुन, काठमाडौं । सबैभन्दा धेरै विद्यालय रहेको काठमाडौंमा सामुदायिक र निजी गरी सयौँ विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुन थालेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा देशभर विद्यार्थी संख्या घट्दै गए पनि काठमाडौंमा निजी विद्यालयमा समेत समस्या देखिएको हो । जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयप्रसाद आचार्यका अनुसार काठमाडौंका २४ सामुदायिक विद्यालयमा २५ भन्दा कम विद्यार्थी छन् । सामुदायिकको भन्दा झन्डै तेब्बर ६२ निजी विद्यालयमा २५ भन्दा कम विद्यार्थी छन् । आचार्यले भने, ‘विद्यार्थी अभावले सामुदायिकभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन् । नियमअनुसार उपत्यका र तराईमा एक शिक्षकबरबर प्राथमिक तहमा ५० विद्यार्थी हुनुपर्छ । तर, कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै छन् । माथिल्लो तहमा भने उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयमा चाप छ । सामुदायिकभन्दा निजीमा समस्या काठमाडौंमा दुई सय ४५ सामुदायिक र आठ सय आठ निजी विद्यालय छन् । ८५ विद्यालयमा सय पनि विद्यार्थी छैनन् । काठमाडौंका आठ विद्यालयमा हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । निजी विद्यालय सामुदायिकभन्दा बढी समस्याग्रस्त छन् । सयभन्दा कम विद्यार्थी हुने विद्यालय संख्या एक सय ८० छ । काठमाडौंका १९ निजी विद्यालयमा मात्र हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेका छन् । सत्तल र गुठीमा चलेका विद्यालय समस्यामा काठमाडौंमा पुराना पार्टी, सत्तल, गुठीमा सञ्चालित विद्यालय बढी समस्यामा छन् । जमिनमा विद्यालयको स्वामित्व नरहेका ती विद्यालय भूकम्पपछि झनै समस्यामा परेको जिशिअ जयप्रसाद आचार्यले बताए । विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय प्राथमिक तहका रहेको आचार्यको भनाइ छ । उपत्यकाका सहरी क्षेत्रका प्राथमिक